युगसम्बाद साप्ताहिक - पैसामा रमाउँदा पतन हुँदैछ समाज - यादब देवकोटा
Thursday, 04.02.2020, 05:08pm (GMT+5.5) Home Contact
रुपैयाँ–पैसा र भोगविलास नै सुख हो भन्ने मान्यताले जरो गाडेको समाजमा सुखको वास्तविक अनुभूति कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने व्यवहारिक ज्ञान र अनुभव साटासाट हुन सकेको छैन । अहिले भौतिक सुविधा त्यो पनि अत्यन्त सरल तरिकाले पाउने होडवाजी चलेको छ । यसैको एउटा उपजका रुपमा लिन सकिन्छ वैदेशिक रोजगारीलाई । हुन त वैदेशिक रोजगारी अहिलेको बाध्यता पनि हो । किनभने मुलुकमा रोजगारी सिर्जना नारामा मात्र भैरहेको छ । दैनिक १ हजार युवा विदेशमा श्रम गर्न कुदिरहेका छन् । यसले मुलुकको आर्थिक स्थितिलाई धानिरहेको छ । संगसंगै समाजलाई उल्टो दिशातिर बगाइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीको योगदान मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ र वैदेशिक रोजगारीकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्दै गएको तथ्यांक हरेक वर्ष सार्वजनिक हुन्छ । तर यससंगै मुलुकमा भित्रिएको र बढ्दो समस्याका बारेमा सबै जानकार भएर पनि बेखबर जस्तै बनिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारी सामान्य जीवनयापनको अनिवार्य शर्त बनेका कारण यसले मुलुकभित्र उद्यमशीलता मर्दै गएको छ । यसले एकातिर मेहेनत गर्ने प्रवृत्तिमा कमी भैरहेको छ भने अर्कोतिर मनोरोगीको संख्या बढाइरहेको छ । यससंगै हत्या, बहुविवाह जस्ता समस्या पनि सामाजिक समस्याको रुपमा विकसित भैरहेको छ ।
नेपालको वैदेशिक रोजगारीले निर्यातमुखी अर्थतन्त्र धान्ने काम गर्ने बाहेक उल्लेखनीय उपलब्धि दिन सकेको छैन भन्दा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन किनभने वार्षिक भित्रिने ८ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी उत्पादनमूलक कार्यमा लागेको छैन । यसले केवल आयात धानेको छ र उपभोग्यवस्तु खरीदलाई सजिलो बनाएको छ । वस्तु निर्यात गरेर आर्थिक उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेमा आयात बढाएर त्यो रकम जताबाट आयो उतै पठाउने काम मात्र भैरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपाली समाजमा मनोरोगीको संख्या बढ्न थालेको छ । श्रीमान वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरू मानसिक रोगको शिकार भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि यसले आर्थिक क्षेत्रमा टेवा दिए पनि सामाजिक व्यवस्थालाई भने भताभुंग पार्दैगएको पाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण कतिपयको घरबार चौपट भएको छ भने कतिपय मृत्युको मुखमा पुगेका छन् । कार्यथलोमै ज्यान गुमाउनेका कुरा एकातिर छन् भने रोजगारीमा गएपछि आफ्नै श्रीमतीले श्रीमानको र श्रीमानले श्रीमतीको धन र ज्यान दुबै लिएको घटनाहरू पनि अनगिन्ती छन् । श्रीमान् विदेश गएका बेला श्रीमती श्रीमानको कमाइ लिएर अर्कोसंग हिंड्ने र श्रीमती विदेशिएका पुरुषहरू अर्कै महिलासंग घरजम गर्ने गरेका घटनाहरू प्रशस्तै छन् ।
मुलुकमा स्वआर्जनको भरपर्दो कुनै क्षेत्र नै छैन । कृषिलाई निर्वाहमुखी समेत बनाउन नसकिएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीको विकल्प समेत तयार हुन सकेको छैन । यसको अर्थ वैदेशिक रोजगारीमा जानु हुँदैन भन्ने होइन तर मुलुकमा रोजगारीको सिर्जनासंगै अवसरको छनोट गर्न भने युवाहरूले पाउनुपर्छ । ५० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । उपरोक्त घटनाहरू केही सामान्य मानिए पनि यी घटना प्रतिनिधिमूलक भने हुन् ।
वैदेशिक रोजगारीले घर परिवारलाई आर्थिक टेवा दिएसंगै पीडा पनि दिएको यथार्थ विस्तारै उजागर हुँदै जाँदा यसलाई रोक्ने कसरी भन्ने गम्भीर सवाल उत्पन्न भैसकेको छ । यसलाई रोक्ने भनेको मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने मात्र हो, वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाउने हो । पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएको समाचार विवरणले श्रीमान विदेश गएका महिलाहरूमा जुन मात्रामा मानसिक समस्या देखिएको छ यो गम्भीर प्रकृतिको समस्या हो । चिकित्सकहरूका अनुसार स्वास्थ्य समस्या लिएर आउने यस्ता महिलाहरूको शरीर परीक्षण गर्दा कुनै रोग नदेखिने तर एक प्रकारको मानसिक रोगले सताइसकेको पाइएको छ । यसको एउटै कारण भनेको वैदेशिक रोजगारीमा भित्रिएको विकृति हो । रोजगारीमा गएका आफ्ना श्रीमानले भनेजस्तो काम पाए कि पाएनन्, श्रीमान कुलतमा लागेका छन् कि ? घरमा किन फोन गर्दैनन्, समयमा किन पैसा पठाएनन् जस्ता विषयको तनावले महिलामा मानसिक समस्या उत्पन्न हुने गरेको पाइएको छ ।
नेपालको वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा झण्डै एक खर्ब रुपैयाँ कालो धन रहेको अनुमान छ । यसलाई करको दायरामा नल्याइदा विकृति मौलाउँदै गएको छ । दलालहरूको जगजगी पनि त्यस्तै छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न अनेक रणनीति बने पनि सो सफल हुन सकेको छैन । दलालको फन्दामा परेर विदेश पुगेकाहरूलाई एयरपोर्टबाटै फिर्ता गरिएपछि पनि उनका पत्नीहरूमा मनोरोगले सताएको पाइएको छ । घरखेत बन्धकी राखेर विदेश पठाएका श्रीमान गएको केही दिनमा रित्तो हात घर फर्किएपछि उनीहरूमा तनाव उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । यसको अन्त्यका लागि वैदेशिक रोजगारीलाई मर्या्दित बनाउनै पर्दछ । दलाली प्रथा निर्मूल नगरेसम्म यो समस्या समाधान हुदैन ।
वैदेशिक व्यापारमा कल्पनै गर्न नसकिने घाटा व्यहोरिरहेको मुलुकका लागि वैदेशिक रोजगारी आयात धान्ने गतिलो मेसो बनेको छ र अर्थक्षेत्रका हर्ताकर्ताका लागि आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नै रहेको छ भन्ने गप चुट्ने बाटो छ । तर यसको दीर्घकालीन असर र यसबाट उत्पन्न भैरहेका सामाजिक समस्याहरूका बारेमा कसैले पनि चासो लिने गरेका छैनन् । नेपालको अर्थतन्त्र धानिरहेका विदेशमा श्रम गर्ने युवाहरूको सुरक्षा, उनीहरूको रोजगारीको ग्यारेन्टी, उनीहरूले पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधाका सवालमा समेत राज्य गम्भीर भएको पाइँदैन । सरकारले जतिसुकै पहल गरे पनि दलाल वा मेन पावर कम्पनीले जे भन्यो त्यसैको आधारमा विदेश जानुपर्ने वाध्यता अझै नेपाली युवाहरूको छ । यसैका कारण अनेक किसिमका समस्याहरू सिर्जित छन् । यसको निराकरण र वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा उनका आश्रित परिवारलाई उचित परामर्श र सल्लाह दिने व्यवस्था गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई परामर्श दिने गरिन्छ । त्यस्तै परामर्श उनीहरूको परिवारलाई पनि आवश्यक रहेको मनोचिकित्सकहरूको सुझाव छ । अर्कोतिर वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको रकम उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने हो भने एउटाले कमाएको पैसाले अरु २ जनालाई रोजगारी दिन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा ४० लाख नेपालीमध्ये २० लाख जनाले पठाएको रकम उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउने हो भने ६० लाख नेपाली युवाले घरमै रोजगारी पाउने छन् । तर यस्तो सोच राख्ने कसले ?
अब समय आएको छ वैदेशिक रोजगारीको बाध्यात्मक अवस्था हटाउने । मुलुकका स्रोत साधनको उपयोगमा ध्यान दिएर आयात प्रतिस्थापनतिर जोड दिने । अहिलेलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरी योजना बनाउने हो भने विदेशमा श्रम गर्न बाध्य युवाहरु स्वदेशमै खेतीपाती गरेर बस्नेछन् । देशलाई अहिले चाहिएको यत्ति हो ।